नेपालमा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने जिल्ला कुन होला? – Hamro24News
July 5, 2021 adminLeaveaComment on नेपालमा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने जिल्ला कुन होला?
नेपालमा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने जिल्ला कुन होला? हरेक जिल्लाका नागरीकलाई आफ्नै जिल्ला जस्तो लाग्छ । सरकारी निकायमा अहिले रकम नबुझाई काम नै नहुने अवस्था भएको छ । अझ पछिल्लो महामारीको कारण सरकारी निकायमा सेवाग्राहीहरु कमै जानाले कर्मचारीहरु सुस्त भएका छन् ।नेपालमा एक पटक यस्तो सर्वेक्षण भने भएको थियो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणले नेपालमा सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र सेवा पाउन घुस खुवाउनु पर्ने अवस्थाको उजागर गरेको थियो । उक्त २०७५ सालमा गरिएको सर्भेक्षण पछि केन्द्रले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि भ्रष्टाचारमा कमी आएको अन्य कुनै सर्भेक्षण भएको वा प्रतिवेदन आएको भने छैन ।उक्त समयमा अन्य जिल्लाको तुलनामा सिरहामा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको केन्द्रले दावी गरेको थियो ।
उक्त बर्ष सतर्कता केन्द्रले सिरहा, बाग्लुङ, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा चितवन र बैतडीलाई नमुना छनोट गरी सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमा सिरहामा सबैभन्दा धेरै ६१ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिँदा घुस दिनुपरेको बताएका थिए । यस्तै अर्घाखाँचीमा १२ , ओखलढुंगामा ८ र बाग्लुङमा ५ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिएर मात्रै काम गरेको बताएका थिए ।
संसदीय समितिमा सबै सांसद समान हुन् , मलाई बाहिर जान निर्देशन दिने नेपालको हैसियत के हो ? : सांसद राना
राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सांसदको गणना?